Enwere ike ime ka SEO dị mma site na otu ụzọ backlinks?
Ọtụtụ mgbe, e nwere ụdị backlinks abụọ dị iche iche iji melite ikike ngalaba na ebe nrụọrụ weebụ gị - na ndị mbụ na-ebute uru ibe na n'akụkụ abụọ (nye-na-take), na otu ụzọ backlinks. Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka m nye gị azịza siri ike - ee, ọ bụ otu ụzọ backlinks nwere ike imezi SEO gị. Ma ugbu a, ka anyị gbanye miri emi n'ime okwu ahụ - continental 185/65 r15 88t.
Nke mbụ, ọ dị anyị mkpa ime ọdịiche dị iche n'etiti njikọ abụọ dị iche iche. Ọzọ, m ga-enye gị nkowa nkenke banyere ebe nrụọrụ weebụ gị dị na ntanetị na otu ụzọ backlinks. Anyị ga-ejikwa ndụmọdụ ndị bara uru mechie ya iji nyere gị aka ịghọta ụzọ ọ ga - esi nweta ụzọ azụlinks - ngwa ngwa ma dị jụụ.
Site na nkọwa, ntinye aka-na-take backlinks na-eguzo maka njikọ ndị mbụ jikọtara ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ onwe ha maka otu ntinye aka na elu weebụ. Ee, njikọ dị otú ahụ dị mma maka ịmegharị okporo ụzọ. Ka o sina dị, ndị na-ejikarị azụ azụ azụ abụọ anaghị enwe oke zuru ezu iji nweta ma ọ bụ ikike dị elu, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mma ogo ogo. N'iburu n'uche na ha dị nnọọ mfe ịmepụta, gbanwee na ọbụna na-emegharị ihe, ụgbọelu ọchụchọ ahụ agaghị achọpụta na azụlinks kachasị dị ka ngwá ọrụ SEO dị ike iji wuo ọnụnọ online maka ebe nrụọrụ weebụ. Ịchọrọ ịhụ ọkwa ọganihu ka njọ? Nke a bụ mgbe ọ na-abịa n'otu ụzọ backlinks.
Otu Backlinks Otu
O doro anya na a haziri njikọ dị otú ahụ iji mee ka ị na-ezo aka n'otu ebe nrụọrụ weebụ n'enweghị itinye ihe njikọ na azụ. Dị ka ụlọ ọrụ ọchụchọ na-eduzi, dị ka Google n'onwe ya yana Yahoo na Bing, ndị backlinks nwere ikike siri ike ka ha nwee ike iduzi ikike ngalaba mpaghara weebụ, n'ihi ya kwa ohere kacha mma ị ga-enwe iji melite mgbasa ozi n'ịntanetị maka ọchụchọ.
Ka o sina dị, rịba ama, na e nwere ọtụtụ ntụziaka siri ike na iwu ndị Google chọrọ iji mee ka egwuregwu dị mma na nke a na-achịkwa maka ibe weebụ ọ bụla na Intanet.Ọ bụ ya mere ịmepụta otu ụzọ backlinks ga-achọ nlezianya anya gị na nyocha mgbe niile na ihe ọ bụla, ọbụna nkọwa kachasị oke, nọ n'ọnọdụ. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike iwepụ mgbalị niile ị na - eme nanị ka ị machibido iwu iwu, ma ọ bụ na mberede, site na ndudue, ma ọ bụ na nzube.
N'ezie, enwere ụzọ atọ dị iche iche iji wuo otu ụzọ backlinks - na ịnweta ụlọ ọrụ mmepe weebụ ma ọ̄ bụ ụlọ ọrụ SEO zuru ezu, na-eji ihe ngwanrọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, yana ịme ya na aka (na-enye gị na ị bụghị onye isi na ụkwụ aka ekpe abụọ). Ikwuputa ọrụ ahụ pụtara na ị ga-aghọta ihe a ga-eme na usoro nke iji kwado atụmatụ achụmnta ego gị niile.
Ọ bụ ya mere m ji gbaa gị ume ka ịmalite site na ịgagharị ụdị ọrụ ụlọ ọrụ free n'efu iji nweta ihe ọmụma dị mkpa banyere mkpụrụ na bolts. N'ihe banyere usoro ntuziaka, ọ bụ ọrụ na-ewe oge, ma ọ ka na-akwụ ụgwọ, ebe ị ga-enweta ihe niile na-achịkwa, n'ejighị ego iji rụchaa ọrụ ahụ. Ka o sina dị, ọ na-aghọkarị ihe amamihe dị na ya maka òkè ọdụm nke ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ọkachamara bụ ndị na-achọ ka ha ghara ịzụta ego, ma na-etinye ego na ahụmahụ ha dị ka ihe dị ike n'ọdịnihu.